check Camera Accessories(2)
check Car Accessories(25)
check Computer Accessories(4)
check Mobile Accessories(13)
check Money dector(3)
check Walki Talki(1)
check 120 pages(2)
check Recycled cardboard(2)
$1.00 - $233.00
check3in 1(1)
check5in 1(1)
check 1 TB(1)
check without Bluetooth(1)
check with Bluetooth(1)
check with Feet(1)
check without Feet(1)
- နာမည်ကြီး american brand ရဲ့ ကွာလတီကို ကြိုက်သူများအတွက် စတိုင်အမိုက်စားဖြစ်ပြီး အား8နာရီ ကျာ်ခံတဲ့ ပုံစံနဲ့ ထပ်မံထွက်ရှိလာပါတယ်။ - ဘက်ထရီ ပါဝါ အားကောင်းပြီး အမြဲတမ်း ဖုန်းနှစ်လုံ ကိုင်တဲ့ ကိုယ် ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ ဖုန်းနှစ်လုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ဖုန်းလာလာ တစ်ခုတည်းနဲ့ ပြေားလို့ ရပါတယ်။
- သင်ဘယ်သွားသွားလွယ်လင့်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပီးအားသွင်းထားနိုင်မယ့် Adaptateur လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- AV out ပဲသီးသန့်ပါတဲ့ Player တွေမှာ HDMI အ၀င် TV တွေနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက် AV ကို HDMI ပြောင်းပေးတဲ့ Converter လေးပါ။
4 in 1 Wirless Air Mouse (မြန်မာစာ/Game ကစားလို့ရ)
- phone / computer / TV / tv box / projector တွေအကုန် တွဲသုံးလို့ရတဲ့ air keyboard နဲ့ mouse ပါ။ android ဖုန်းမှာ မြန်မာစာကအစသုံးလို့ရပါတယ် ။
Lamp Money Detector
- Lamp Money Detector အနေဖြင့် ဘယ် ငွေကြွေး မဆို စက်ပေါ်တင်ယုံဖြင့် ပုံမှန် မျက်လုံးနှင့် မမြင်နိုင်သော ငွေအစစ် အမှတ်အသားကို စက် ရဲ့ Lamp အကူအညီဖြင့် လွယ်လင့်တကူ စစ်ဆေးနိင်တဲ့ စက်လေးပါ ။
- Wireless Output - 5V/0.4A နဲ့မို့ apple watch series အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
ခရီးထွက်တဲ့အချိန် Phone ကို ထောက်ဖို့ Stand လိုနေပါသလား ? Projector ကြည့်ဖိုအတွက် Stand လိုနေပါသလား ? ဒီ Universel Tripod with Remote control လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- နေရာင်ခြည်ဒဏ်ကာကွယ်ပေးပြီး ဖုန်းပြောလို့လည်းရ သီချင်းလည်းနားထောင်လို့ရတဲ့ bluetooth sunglasses လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.
- နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်များအသုံး ပြုကြသော အသစ်ထွက်ရှိလာသော USB Stick Recorder လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- မီးပျက်ရင် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ WGP mini UPS လေးတွေ အသင့်ရှိနေပါပြီ...
သင် စိတ်မချရတဲ့သူ ဘယ်တွေရောက်နေလဲ ဆိုတာ သိရစေဖို့အတွက် GPS Tracker လေးကို သုံးပါ…။
- Jabra မှအသစ်ထွက်တဲ့ Bluetooth Handsfree နားကြပ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
Ultra thin Portable Hard Drive
- ဒီဇိုင်းလန်းလန်း နဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Transcend External Hardisk လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ...
- mobile phone ရှိသူတိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင် ထားသင့်တဲ့...အဝေး ရိုက်..ဖုန်းcamera lens လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
- အိမ်သုံး/ကျောင်းသုံး/ ရုံးသုံး/ဓမ္မာရုံ ဘုန်းကြီးတရားပွဲများတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် Speaker ပဲဖြစ်ပါတယ်။
- အရည်အသွေးမြင့်ပြီးအန္တရယ်ကင်းစိတ်ချရသော USB ၄ပေါက်ပါပြီး Fast Charger ပါ ပါဝင်သော power socket ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသေးဆုံး bluetooth handfree လေးပါ။ တဘက်တည်း တပ်ဆင်ရသေား ဒီဇိုင်း ဖြင့် လှပပြီး နာတွင်း ၀တ်ဆင်ထားမှန်း မသိအောင် ပေါ့ပါး သေားဒီဇိုင်းလေးနှင့် ရိုးရှင်း လှပ တဲ့ wireless Headset လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
- LED မီးလုံးများနဲ့အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ 3D စတူဒီယို အရည်အသွေးမြင့် Wireless Bluetooth Speaker လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- Bluetooth Function မပါတဲ့ကားတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့်Car Accessories ပစ္စည်းဆန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
- အသစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ keyboard &amp; mouse တွဲရက်လေးပါ၊ မိမိ ရဲ Mobile ဖုန်းနဲ့ tablet တွေကို ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးလို အသုံးပြုချင်သူများအတွက် ပစ္စည်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
- HDMI Switch5IN 13IN 1 ရပါပီ - dmi Switch လေးမှာ အဝင် ၅ ပေါက် အထွက် ၁ ပေါက်ပါဝင်တဲ့အတွက် စက်၅လုံးအထိ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ - မိမိပြောင်းလို့တဲ့ Port ကို Remote ကနေတဆင့်အလွယ်တကူ ပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက် ပိုပီး အဆင်ပြေပါတယ်။
သေးငယ်ပြီး အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်သည့် ငွေအတု အစစ်စစ်လို့ရပြီး တခြားနေရာတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင် သည့် ဓာတ်မီးလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ..
TDK Sim Motorola
- တန်ဖိုးနည်းပြီး အရည်းသွေးကောင်း, လိုင်းဆွဲအားကောင်းသော Global Walki Talki ကိုလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ...
- လက်တစ်ထွာတောင်မပြည့်တဲ့wirless keyboard mouse လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
- Wirless Headphone (JBL Design) နာကြပ်များကိုခေါက်ထားနိုင်သော ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်
ခရီးထွက်တဲ့အချိန် Phone ကို ထောက်ဖို့ Stand လိုနေပါသလား ? Projector ကြည့်ဖိုအတွက် Stand လိုနေပါသလား ?
- တရားပွဲအတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? ရပ်ကွက်အတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? စာသင်ခန်းအတွက်သုံးခြင်ပါသလာ? ခဏတာ ပွဲအတွက် လိုအပ်နေပါသလား?
3Camera Touch Screen Car Blackbox
- လုံခြုံ စိတ်ချဖို့ ကားတစ်စီးအတွက် Blackbox တစ်ခုကိုရှာနေပါသလား Mirror Car blackbox နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- မိမိချစ်ခင်သူများကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုတိုင်သုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်World first ultr-thin card phone လေးဟာ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး credit card size လောက်ပဲရှိ ပါတယ်။ - ကြုက်တဲ့ sim card ထည့်သွင်းးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာလဲပါပါတယ်။
- နာမည်ကြီး JBL မှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ first copy bluetooth sport handfree လေးပဲ ဖြစ်ပြီး လိပ်ခေါက် ထားနိုင်သေား ဒီဇိုင်းဖြင့်လာပြီး အသုံးပြုချင်သေားအခါမှ လည်းပင်းတွင့် ဖြန့်ပြီး ချိတ်ထားနိုင်သဖြင့် နားတွင်းလေးလံချင်းကို မခံစားရပဲ အားကစားလုပ်နေချိန်ရေား သားမန်အချိန်များတွင်ပါ သက်သောင့်သက်သာ ရှိလှပါတယ်။
- Digital အသံစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ Optical (Toslink) နဲ့ Coaxial ၀င်ပြီး Analog audio အဖြစ်ပြန်ပြောင်းပေးမယ့် Converter လေးပါ။
Light weight plastic tripod
- အိတ်ဆောင်ပေါ့ပါးသောကင်မရာ tripod ၊ ကင်မရာနှင့် ဗွီဒီယိုကင်မရာများအတွက် တည်ငြိမ်သောကင်မရာ tripod လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
Red Black Blue Yellow Pink White Pearl violent
3D Mini Lens for Mobile Phone
FB မှာ Live တင်တဲ့အခါ နှစ်ကိုယ်ခွဲအဖြစ် မြင်ရစေဖို့၊ VR Box တွေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် 3D VR Video တွေ ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပေးမယ့် 3D Lens လေးပါ။
- Solar Lighting System ဟာ လင်းအားအလွန်ကောင်းတဲ့ ဓါတ်မီးလေးပါ ။ LED6လုံးကို သုံးတန်းတန်းထားပြီး အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် စူးရှတဲ့ အလင်းရောင်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
- အစည်းအဝေးခန်းမတွင်း၌ အရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဆွေးနွေးသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း မိမိ၏နောက်ကွယ်တွင် ပြောဆိုနေကြသည့်အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်နားထောင်လိုသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊သတင်းထောက်များ သတင်းအချက်အလက်များကို အသံဖိုင်များဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရာ၌လည်းကောင်း အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့် အိပ်ဆောင် Recorder လေးများကို မလွဲမသွေလိုအပ်မှာပါ...
I8 Wirless Mini Keyboard & mouse Combo
- ခရီးသိပ် မထွက်ရသော်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် အဝေးကို ကြည့်တဲ့ မှန်ပြောင်းလေးတွေမြင်ရင် အလိုလိုကို လိုချင်နေမိတဲ့ ကျွန်တော့်လို လူများ အတွက် ဒီပေါ့ပေါ့ပါးပါး တစ်ဖက်ကြည့် Monocular လေးက အတော်ကို သင့်တော်ပါတယ်။
- ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဘဏ်တွေက ငွေစက္ကူ အတုတွေ ပါတယ်။ - အသိဆိုင် မှာ ငွေစက္ကူ အတုတွေနဲ့ ဈေးဝယ်သွားတာ ပြန်သွားမှသိတယ်တို့ နဲ့ စတဲ့ အများနဲ့ ပေးချေတဲ့ နေရာတွေကို ပြစ်မှတ်ထားပြီး ငွေစက္ကူအတု နဲ့ ဈေးဝယ်သွားတဲ့ သတင်းတွေကို online မှာ နေ့စည် တက်လာတာတွေ့နေရတာ စိုးရိမ်းစရာ ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။
4X RC Nitro Racing Car
- တကယ် အင်ဂျင်အစစ်နဲ့ Nitro ဆီထည့်ပြီး မောင်းလို့ရတဲ့ Racing ကားကိုရှာနေပါသလား ? လက်ရှီ ကားလေးက မှိုင်နန်း ၆၀ အထိမောင်းနင်နိုင်သလို ရေ ပေါ် လျှပ်ပြေးပါ သုံးလို့ရပါတယ် ။
- သာမန်powerbank တလုံးလိုပဲ ကောက်ကြည့်လိုက်ရင် ကင်မရာပါမှန်းလုံးဝ မသိနိုင်ပါဘူး... - ဒါပေမယ့် မိမိကို တခုခုဆို လျှင် သက်သေ အထောက်အထား သိမ်းဆည်းပေးနိုင်သေား၊ လှျို့ဝှက်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သေား ၊ video ကောင်းလေးတွေ ရိုက်ထားပေးနိုင်သေား ၊ ပျောက်ဆုံး ခိုးမှု့တွေ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သေား ထောက်လှမ်းရေးသုံး ပါဝါဘန့် ကင်မရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- Function , menu , volume + / - , next , play , phone accept , AuX Button contain. Phone လာလျင်လည်း speaker မှတဆင့် phone ကိုင်နိူင်ပါတယ်။
USB4port ပါပြီး အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Universal Socket လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- Apple ကထုတ်တဲ့ wirless keyboard အတွက် အားသွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် Mobee ကထုတ်တဲ့ ဒီ The Magic Bar လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
- နေ့စဉ်လုံခြုံရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော video file ရုပ်သံဖိုင်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပေးပြီး ဖုန်းဖြင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သော camera လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ... - ရှေ့မြင်ကွင်းဘေးဘက် ရုပ်ရောအသံပါ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖမ်းယူ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ထွက်မှာ HD ဖြစ်ပြီးဖုန်းဖြင့် တစ်ပြိုင်နက် ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
- သေ့ာချိတ်တွင် ကင်ရာလေးပါတော့ ဟိုနေရာတင်ထားရင် video ရိုက် ဒီနေရာမှာ ရပ်နေရင် video ရိုက် ကို တဘက်လူမသိပဲ လုပ်ဆောင် record လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
-သေးငယ်ပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ powerbank လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
HDMI Splitter 1in4out
- Player Device တစ်ခုထဲကို TV/Monitor 4လုံးဖြင့်ကြည့်ချင်သူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
- ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့သုံးရတာအဆင်ပြေစေမဲ့ Phone Stent လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Grey Red Black Pink Gold
- computer ; Laptop ; Portable EVD &amp; DVD , Mobile phone , tablet , တို့နှင့်တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ - အသံထွက်ချက်ကတော. Big speaker တွေ အတိုင်းဘဲ ကောင်းမွန်ပါတယ်။
T18 Wechip Mini Wireless
- Mini Wireless Keyboard လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
- အသံထွက်အားကောင်းပီး Touch Sensor ပါဝင်တဲ့ Bluetooth Earphone လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- ကားရှိသူတိုင်းအတွက် မဖြစ်မစေတပ်ဆင်သင့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
- တရားပွဲအတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? ရပ်ကွက်အတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? စာသင်ခန်းအတွက်သုံးခြင်ပါသလာ? ခဏတာ ပွဲအတွက် လိုအပ်နေပါသလား? အသံလဲ ကျယ် ဈေးနန်းသက်သက်သာသာ နဲ့ ကိုယ် အိမ် နီးချင်းကအမြင်ကတ်လောက်အောင် ကောင်းတဲ့ speaker နဲ့ microphone လေး ရှာနေပါသလား ဒီ High Power Karaoake Microphone with bluetooth Speaker လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
Drift Champion car
- အခုလိုအားလပ်ရက်တွေမှာ ကလေးတွေကို လက်ဆောင်ပေးချင်တာအတွက်ဆို အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် Drift ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Car Blackbox A39
-လုံခြုံ စိတ်ချဖို့ ကားတစ်စီးအတွက် Blackbox တစ်ခုကိုရှာနေပါသလား ။Car blackbox နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- သံစဉ်တေးသွားလေးတွေ နဲ့စီးမျောခံစားနိုင်ပြီး အခြားစပီကာများနှင့်မတူပဲ ဆန်းပြားသော ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ LEDမီးများအကြား စည်းချက်နှင့်အညီကခုန်နေသောရေများကို ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အတွက် ကြည်နူးမှုကို ရရှိစေမှာပါ။
Universal Clip-type LED cellphone microscope
-Clip Type ဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်ဖုန်း ဟန်းဆက်နှင့်မဆို အလွယ်တကူတပ်ဆင် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ ဖုန်းဟန်းဆက်၏ မှန်သားကို မထိခိုက်စေရန် ချောမွေ့သော ရော်ဘာ+ကတ္တီပါသားဖြင့် cover လုပ်ပေး ထားပါသည်။
Bluetooth ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ keyboard လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ..
3 In 1 Multi Function Game Handle
- Handle အနေနဲ့ Game control ပုံစံပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် လက်ကိုင်အနေနဲ့ပါအဆင်ပြေပြီး ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လက်မကို မြဲစွာကိုင်ပြီးကစားနိုင်တဲ့ Product လေးဖြစ်ပါတယ်။
- USB 3.1 ကို Superspeed+ USB လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်၊ သူ၏ အများဆုံးရရှိ နိုင်သည့် transmission rate သည် 10 Gbps ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Grey Black Sapphire
- ခေတ်ကာလပြောင်းလဲမှုကြောင့်… လုပ်ငန်းတွေ၊ စာသင်ကြားတာတွေ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံတာတွေကို အင်တာနက်ကတဆင့် လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ webcam တွေ ပိုသုံးလာကြပါပြီ…
RC Car With Remote Control
- တောင်တက်ကားအနေနဲ့လည်း မောင်းနှင်နိုင်မယ့် Racing Car လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
- ဖုန်းပြောဖို့ သီချင်းနားထောင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အိတ်ဆောင်နားကြပ်လေးပါနော်
ကလေးများအတွက် သေးငယ်ပီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ ကင်မရာအသေးလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး ဘယ်သွားသွားအိပ်ထဲအလွယ်တကူထည့်သွားလို့ရမဲ့ စတိုင်ကျပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Foldable Bluetooth Keyboard လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
-ဖုန်းမြင်ကွင်းကို လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းထက် 12ဆ ထိချဲ့ထွင်ပေးနိုင်ပြီးကြည်လင်ပြတ်သားသောရုပ်ပုံများကိုရိုက်ကူးပေးနိုင်မဲ့ Telescope လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဖုန်းနဲ့အတူတွဲသုံးလို့ရတဲ့ wireless bluetooth keyboard လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
Wlaki Talki Earphone
-ယခု မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ Walkie talkie Earphone လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Professional Speaker MSA 9018 XX0013
- Computer ; Laptop ; mobile phone ,tablet တို့နှင့်တွဲဘက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
- ဒီလိုပူပြင်းတဲ့ နေပူဒဏ်မှ သင့်ရဲ့ကားကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ car body တစ်ခုလိုနေပီလား....
သေးသေးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Speaker လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ...
Lazy Snake Mobile Stand
- အလေးချိန်အနည်းငယ်ရှိလို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ လက်ညောင်းနေရလား?ဒီလို ဒုက္ခတွေနဲ့ ကင်းဝေးစေဖို့အတွက် အကြံကောင်းလေးတခုပေးပါရစေ။Lazy Snake Mobile Stand လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်.......
- မိုးအရမ်းရွာတဲ့အခါ/ နှင်းတွေပိတ်ဆိုင်းနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကားကို နောက်ကနေ အခြားယာဉ်များက ဝင်မတိုက်အောင် အရံအတား လေဆာစည်းလေးတစ်ခု တားဆီးပေးတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ၊၊
JIABAO Charger Expert
- နေ့စဉ် လစဉ် ဓါတ်ခဲဝယ်သုံးနေရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ ရုံးကိစ္စတွေအတွက် ငွေယိုပေါက် သက်သာစေမယ့် ဓါတ်ခဲအားသွင်းစက်လေးပါ။
Car and Home Adapter For Laptop
- အရေးပေါ်အပြင်သွားစရာရှိပီး Laptop ကလည်း အားမရှိလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား။ ကားထဲမှာရော အိမ်မှာရော ခရီးသွားရင်လဲ အလွယ်တကူယူဆောင်သွားနိုင်ပြီး အရေးပေါ်သွင်းလို့ရတဲ့ Adaptor လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
3 in 1 Mini Laser Pen
-3in 1 mini laser လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ......
Grey Red Blue Green Yellow Black Sapphire
i 17 Bluetooth Earphone
-Bluetooth နားကြပ်ကောင်းကောင်းကိုမှ လိုချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အရေအသွေးမြင့်....ဘက်စုံသုံး ၊ လူအမြင်ဆန်းတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း နာကြပ်လေးပါ။
-ဒီနားကြပ်လေးတွေက touch system နဲ့ပါရှင့် သီချင်းအပုတ်ကျော် သီချင်းဖွင့်/ပိတ်/ဖုန်းကိုင် ရင် တအားဖိစရာမလိုပဲ ညင်ညင်သာသာ လေးတချက်ထိရုံနဲ့ရတာမို့ နားနာမှာပူစရာမလိုတော့ပါဘူနော်
White Red Green Yellow Dark Blue violent
Sports Gear Gloves
- အားကစားလုပ်ဖို့ ​ဈေးသက်သာပြီး Quality ​ကောင်းတဲ့ လက်အိတ်​လေးတွေ လိုချင်တယ်ဆိုရင် sport gear glove လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.
- ခရီးသွားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်သွားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကားထဲမှာရုပ်ရှင်ကြည့်လိုသူများ အတွက် universal stand လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
Portable Motor Cycle Holder
- ဆိုင်ကယ်အမြဲမောင်းနေရတဲ့ အကိုတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ရှိထားသင့်တဲ့ ဆိုင်ကယ် phone stand holder လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်
- ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သော magic hose ရေပိုက်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.....
USB Power Supply PDA Power 3Sockets
- Car ပေါ်မှာPhone batteryအားသွင်းဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အခါ စိတ်မပူပါနဲ့ Car Charging လေးရှိပါတယ်.....